Ntughari Na: Mgbatị ahụ iji cheta ebe ị nọrọ na weebụsaịtị | Akụkọ akụrụngwa
Cheta ebe ikwere na webụsaịtị na Scrroll In
Eder Esteban | | Aplicaciones, General
Google Chrome bụ ihe nchọgharị nwere oke nhọrọ nke ndọtị dị. Ọtụtụ n'ime ndọtị ndị a na-eme ka ndụ anyị dịtụ mfe, na-enye ohere iji ihe nchọgharị ahụ nke ọma karịa. Omume anyị na-eme mgbe niile mgbe anyị na-agụ na ibe weebụ bụ ịpịgharịa (slide). Ọ bụ ezie na enwere oge mgbe anyị na-echefu ebe anyị nọrọ. Na ọnọdụ a enwere ndọtị a na-akpọ Scrroll In.
Enwere ike ụfọdụ n'ime gị Scrroll In nwere ike ịdị ka ihe. Mgbatị a na-enweta ewu ewu n'etiti ndị ọrụ na Google Chrome. Ekele dịrị ya anyị agaghị echezọ ebe ọzọ anyị nọrọ Na weebụsaịtị. N'ụzọ dị otú a, anyị nwere ike ịga n'ihu na-agụ ebe anyị nọ.
1 Ntughari Na: Ihe ọ bụ na otu o si arụ ọrụ
2 Esi nweta ndọtị a
3 Etu esi eji Scrroll Na Google Chrome
Ntughari Na: Ihe ọ bụ na otu o si arụ ọrụ
Scrroll In bụ ndọtị dakọtara na Google Chrome. Isi ọrụ ya bụ chekwaa isi okwu a di na websaiti anyi biiri ma ọ bụ ókè anyị rutere site na ịpịgharị. N'ụzọ dị otú a, mgbe anyị chọrọ ịlaghachi na weebụsaịtị a, a ga-akpọga anyị n'otu ebe a ma anyị ga-enwe ike ịga n'ihu na-agụkarị na weebụsaịtị ahụ.
Otu uru dị ukwuu na ndọtị a bụ na ọ ga-arụ ọrụ n'agbanyeghị na anyị emechiela ibe weebụ ahụ. Ọ bụrụ na ị mechie weebụsaịtị, mana mgbe obere oge ị banyere ya ọzọ, Scrroll In ga-eduru anyị ruo ebe anyị kwụsịrị n'oge ahụ. Ya mere, anyị nwere ike ịga n'ihu n'ịgụ ihe. Njirimara a bụ ihe na-eme ka ndọtị na-adịkarị mfe maka ndị ọrụ.
Ọ bụ ezie na ee na nwere mmachi na anyị enweghị ike imechi Google Chrome. Ọ bụrụ na anyị mechie ihe nchọgharị ahụ n'oge ụfọdụ, anyị ga-atụfu ọganihu anyị megoro na ebe anyị nọrọ na weebụsaịtị ahụ agaghịzi azọpụta. Ọ bụ otu akụkụ iji buru n'uche mgbe anyị ga-eji ya na nke anyị. Mana ma ọ bụghị na ọ naghị eweta nsogbu nke iji n'ozuzu ya.
Esi nweta ndọtị a
Ọ bụrụ n'ịchọrọ inwe Scrroll Na na ihe nchọgharị gị, usoro ndị ahụ dị mfe. Ebe ọ bụ na dịka ọ na-eme na ndọtị niile anyị hụrụ maka Google Chrome, Anyị nwere ike ibudata ya na ụlọ ahịa ndọtị site na ihe nchọgharị Google. Anyị kwesịrị ịchọ ya n'ụlọ ahịa kwuru. Mana ọ bụrụ na ịchọrọ ụzọ kachasị ọsọ, ị nwere ike tinye njikọ a iji nweta ya ozugbo.
Dị ka ọ na-adịkarị, nbudata ndọtị a na ihe nchọgharị ahụ bụ n'efu. Ya mere, ị ga-pịa bọtịnụ na-acha anụnụ anụnụ iji gbakwunye Google Chrome na ihe ole na ole ị ga-enwe Scrroll Na-arụ ọrụ nke ọma na ihe nchọgharị ahụ. Ga-ahụ na n'elu aka nri akụkụ ị nweta akara ngosi nke ya.
Ọ bụ ọkọlọtọ na-acha ntụ ntụ, nke mere na-egosi na ndọtị a na-arụ ọrụ na ihe nchọgharị ahụ. Yabụ mgbe anyị mechara usoro a nke ịwụnye ya, anyị nwere ike ịmalite iji ya na Google Chrome na ibe weebụ niile anyị ga-eleta.
Etu esi eji Scrroll Na Google Chrome
Ozugbo arụnyere na mgbe anyị hụrụ akara ngosi nke ndọtị, anyị nwere ike iji ya na ihe nchọgharị ahụ oge niile. Ọrụ ya anaghị eweta ọtụtụ nsogbu. Mgbe ị na-eme nchọgharị ma ọ bụ na-agụ na peeji ebe enwere ọtụtụ ederede, mana ị nọrọ n'otu ebe ma chọọ ịgụ ndị ọzọ mgbe e mesịrị, mgbe ahụ i nwere pịa na Scrroll Na akara ngosi nke dị n'elu aka nri nke ihuenyo ahụ.
O ga enyere anyi aka izoputa oge a nke anyị nọrọ na ya mgbe anyị na-agụ akwụkwọ weebụ a. Anyị nwere ike mechie weebụsaịtị a, ọ bụrụ na ị ga-ahapụ ma ọ bụ na anyị achọghị iji ya n'oge a. N'oge a anyị ga-alaghachi na webụsaịtị ahụ, anyị nwere ike ịlaghachi n'akụkụ a ebe anyị nọrọ.
Mgbe ị banyere webusaiti a na-ekwu, ị ga-ahụ na Scrroll Na akara ngosi dị na uhie, nke pụtara na anyị echekwala ebe anyị nọrọ na ibe weebụ a. Yabụ, ọ bụrụ na anyị pịa akara ngosi ndọtị, anyị ga-enweta ọtụtụ nhọrọ. Otu n’ime ha bụ Akwụkwọ Mpịakọta Achịcha, nke bụ ihe masịrị anyị. Ebe ọ bụ na mgbe ịpịrị ya, ọ na-akpọga anyị kpọmkwem ebe anyị nọrọ na ibe weebụ a. Yabụ anyị ga-enwe ike ịmaliteghachi ịgụ akwụkwọ oge niile.
Ọ bụrụ na n'otu oge anyị gụchaa na weebụsaịtị a, anyị nwere ike wepu kwuru welara na anyị kere na ndọtị. Site na ịpị ọzọ na akara ngosi Scrroll Na akara ngosi, anyị nwere ike ịhụ na enwere nhọrọ Hichapụ. Anyị nwere ike iji ya mgbe anyị achọghịzi ịchekwa isi okwu ahụ.
Pathzọ zuru ezu na edemede: Akụkọ akụrụngwa » General » Cheta ebe ikwere na webụsaịtị na Scrroll In
Sony na-ekwuputa ọkwa PlayStation 5 ọhụrụ